IKhomishini Scolaire Marie-Victorin (CSMV) - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Izinhlelo zePathwayIkhomishini Scolaire Marie-Victorin (CSMV)
Indlela yakho eya eCanadaIkhomishini Scolaire Marie-Victorin (CSMV)
ICommission Scolaire Marie-Victorin yenziwa izikhungo ezingama-72 kubandakanya izikole, izikhungo, kanye nesikhungo saso sokuphatha.
ICommission Scolaire Marie-Victorin yasungulwa ngoJulayi 1, 1998, lapho kwamiswa amabhodi ezikole ezilimi. Enye enkulu kunazo zonke eQuebec, isebenza ngaphezu kwabafundi abangama-41,000, abantu abasha kanye nabantu abadala. Inabasebenzi abajwayelekile abangama-4,500 72 nezikhungo ezingama-XNUMX. Ungomunye wabaqashi ababaluleke kakhulu kwi-South Shore.
ICommission Scolaire Marie-Victorin yaqanjwa ukuhlonipha uMfowethu Marie-Victorin.
Ikhomishini Scolaire Marie-Victorin (CSMV)Olunye ulwazi
Thuthukisa amakhono adingekayo ukusebenzisa izindlela ezibalulekile ekusebenzeni kwezohwebo njengokuxazulula izinkinga, ukubuyisa imininingwane nokulawula isikhathi. Amakhono ahlobene nokusetshenziswa kahle kwesoftware nawo athuthukiswa: ukusebenzisa amathuba wezinhlelo ezisebenza ngobuchwepheshe obudala nokuthuthuka, ukusebenzisa amathuba wesoftware yesicelo, ukudala nokuxhaphaza i-database, ukusebenzisa amathuba wezindlela zokuxhumana ngocingo. Thuthukisa amakhono ahlobene nokuxhumana kwendawo yokusebenza kanye nensizakalo yamakhasimende njengokuthi: ukuxhumana ngezimo ezahlukahlukene zomsebenzi, ukuxhumana ngesiNgisi, ukuhlinzeka ngosizo lwamakhasimende kusuka esikhungweni sezingcingo. Ekugcineni, uthuthukise amakhono adingekayo okwenza imisebenzi kuma-computer azimele noma anenethiwekhi: hlaziya ukwakhiwa kanye nokusebenza kwezinhlelo zamakhompiyutha, uthuthukise uhlelo lokusetshenziselwa, faka izinto ezibonakalayo nezomqondo wokusebenza kwekhompyutha, ukuphatha ukufinyelela izinsiza zenethiwekhi, ukusetha inethiwekhi izinsiza ezokwabiwa, ukubuyisela ukusebenza kwe-workstation yekhompyutha, yenza kahle ukusebenza kwehhovisi lekhompyutha.
Zuza ulwazi, amakhono kanye nezimo zengqondo ezidingekayo ukwenza umsebenzi wokulungiselela ukushisa kanye nokuhlangana, ukwenza imisebenzi yokuhlangana neyokufakelwa kwezinto eziyisisekelo, izinto zokwakha, amaphrojekthi womhlangano wezezimboni nezinhlaka zensimbi ngezinqubo ezihlukile zokufudumeza, funda amasu wezimboni futhi uhumushe ukucaciswa nokushiswa izinqubo.
Thuthukisa amakhono ayisisekelo adingekayo ukwenza imisebenzi yezohwebo, okungukuthi: vimbela izingozi zezempilo nezokuphepha, uxazulule izinkinga zezibalo ezihlobene nokusebenzisa imishini ngamathuluzi ajwayelekile nawomshini we-CNC, ukutolika imidwebo yobuchwepheshe, yenza imidwebo yokufunda nezilinganiso, ukuthuthukisa amakhono athile wokukhanda amathuluzi ejwayelekile womshini ngokwenza i -workshop, ukuguqula, ukugaya, ukwenza isizungu nokusebenza kwemishini ezingxenyeni ezilula, izingxenye eziyinkimbinkimbi nokukhiqiza uchungechunge; athuthukise amakhono adingekayo wohlelo lokufundwa kanye nokukhishwa kwezingxenye ezilula kumaswensi we-lathes nasezikhungweni zemishini ze-CNC; athuthukise amakhono adingekayo ekusebenzeni ngokubambisana emaqenjini e-multidisciplinary kanye namakhono adingekayo wokuhlanganiswa okuvumelanayo esikoleni nendawo yokusebenza yasemsebenzini.